Mba hitondra fivoarana! | NewsMada
Saika ahitana fanamboaran-dalana avokoa amin’izao fotoana izao, manerana an’Antananarivo, fanamboarana hisorohana zavatra maro, toy ny fitohanan’ny fiarakodia sy ny lozam-pifamoivoizana isan-karazany. Manana tanjona ny hampivoatra sy hampandroso ny fitondrana matoa manao izany ezaka izany, antenaina fa tena ho fivoarana marina tokoa fa tsy vao mainka hampitombo ny olana andavanandron’ny Malagasy. Fiainana isan’andro ary efa tsy mahataitra ny fitohanan’ny fiarakodia eto an-dRenivohitra, indrindra ao anatin’izao fotoan’ny fanamboaran-dalana etsy sy eroa izao, fanamboarana hamahana io olana lavareny iainana io.
Etsy ankilany, mitombo isan’andro ihany koa ny lozam-pifamoivoizana ateraky ny faharatsian’ny lalana sy ny fisetrasetran’ireo mpitondra moto. Hisorohana izany rehetra izany io fanamboaran-dalana io. Tokony hisy, araka izany, ny fahaizana milefitra ho an’ny mpampiasa ireny lalana hahitana fanamboarana ireny satria hitondra fivoarana ny anton’izany fa tsy inona tsy akory!
Tranga iray hita amin’ny andavanandrom-piainan’ny Malagasy ihany koa amin’izao ny mahakasika ny fitaterana amin’ny sarety sy posy eto an-dRenivohitra. Mifampiankina betsaka amin’io fanamboaran-dalana io ihany koa izany satria toa vao mainka mampitombo ilay fitohanan’ny fiara. Efa notaterina teto, miverina mahazo laka indray ny fitaterana amin’ny sarety sy posy eto an-dRenivohitra. Tsy ilay asa akory sanatria no ratsy fa ny fidiran’izy ireny amin’ny ora voaràra no nahatonga resabe, indrindra ho an’ireo mpampiasa ny arabe eto an-dRenivohitra, izay saika mimenomenona amin’ny afitsony. Efa nisy anefa ny lalàna napetraka izay tsy voahaja hatrany. Hita ary tsapa hatrany fa mandalo fotsiny ihany ny fametrahana lalàna eto amintsika, ary saika hita taratra amin’ny sehatra rehetra mihitsy izany tsy fanarahan-dalàna izany. Matoa anefa apetraka ny lalàna, mba hitondra fampivoarana sy tsy hahatonga ny gaboraraka ka samy hanao izay saim-pantany ny rehetra. Mila manova toe-tsaina raha te hivoatra ary tokony hotohanan’ny vahoaka ny ezaky ny fitondrana hita fa hitondra fivoarana!